पर्सामा काजमा रहेका प्रहरीहरु अशुलीमा मस्त , यसो भन्छन् एसपी ढकाल
प्रनिश थापा , पर्सा , २७ असार । पर्सा जिल्लामा तस्करहरु फस्टाउन थालेको चर्चा चलेको छ । क्राइममा रूपमा खटिएका अधिकांश घुमुवा प्रहरीहरुको अशुली धन्दाले समेत जरा गाड्न थालेको हो ।
कार्यालय प्रमुख रेवती ढकाललाई समेत गुुुम्राहमा राखी अशुलीमा मात्रै केन्द्रीत भएको दाबी स्रोतको छ । भनिन्छ एउटा आलुले सिंगो आलु कुहाउन्छ । तर , त्यहीँ कुहिएको आलुलाई ब्यवस्थित नगर्दा पर्सा जिल्लाभरका सबै प्रहरी बिवादित बन्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
कार्यालय प्रमुखले नैै सुुुरक्षामा खासै चासो नदिँदा जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी प्रहरीको मनोमानीले यतिखेर हद नाघ्न थालेको स्रोतले बताएको छ । कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका एसपी रेवती ढकालले बिवादित प्रहरीलाई मात्रै काखी च्याप्नुले पनि यथेष्ट रूपमा शंका गर्न सकिने ठाउँ रहेको चर्चा छ । इमान्दार प्रहरी अधिकृतको उनलाई त्यहाँबाट भनेअनुसारको कमिसन आउने भएकोले एक्सनमा नउत्रिएको हो कि भन्ने हल्ला समेत पर्सा प्रहरीमा व्यापक रूपमा चलिआएको छ ।
उनी अन्य प्रहरी अधिकृतको तुलनामा त्यत्ति बिवादमा नआए पनि बदनाम प्रहरीलाई मात्रै एकत्रित गर्दै हिंड्न थालेपछि अब भने बिवादमा तानिने लगभग पक्कापक्की जस्तै भएको स्रोत बताउँछन् । त्यहाँ कार्यारत अधिकांश प्रहरीको दरबन्दी जिल्लामा छैनन् ।
दरबन्दीमा रवाना दिएर फिर्ता पठाउनु एसपीको पहिलो कर्तव्य र दायित्व हो तर, एसपी ढकाल यहिं चुकेका छन् ।
बर्षौंदेखी बदनाम रहेका प्रहरीलाई मात्रै उनले काखी च्याप्नुको कारण के हो त ? हामीले उनी सित मंगलबार दिउँसो जवाफ समेत मागेका थियौं ।
जवाफका क्रममा उनले त्यस्तो केही नभएको भन्दै आफ्नो संगठनलाई बचाउने हरसम्भव प्रयास गरे । केहि विवादस्पद प्रहरीका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको एसपी ढकालले न्यूज अभियानलाई बताए ।
इमान्दारीपूर्वक संगठनको ओहोदामा रहेर काम गर्नेलाई उनले देख्नै नसक्ने खबर समेत छ । स्रोतको भनाइलाई उदृत गर्दै हामीले उहाँलाई बर्षौंदेखी एकछत्र रूपमा जिल्लामा राज गर्दै आउने बिवादास्पद प्रहरीलाई दरबन्दीमा फिर्ता पठाउनु तपाईंको पहिलो कर्तव्य हो या होइनन् भनी प्रश्न गर्दा उनले सुरुमा त अकमक्काए पछि हो समेत भने लगत्तै हामीले केही प्रहरीको नाम दिएर यिनलाई किन नहटाएको त भनी जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ मुखबाट आउन सकेनन् ।
पछि बोलेका उनले यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको बिषयबस्तु भएको भन्दै यस्मा केही नबोल्ने संकेत गरे । हामीले उनी सित इमान्दारी प्रहरीलाई किन लखट्नुहुन्छ भनी प्रश्न समेत गरेका थियौं । सुन , मरिच समात्ने इनर्वा प्रहरीका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक त्रिभुवन शाह र टाइगर टोलीका प्रहरी जवान सन्तोष पट्टेललाई जिल्लाबाट हटाइएको बारेमा प्रश्न राख्दा उनले सरुवा भएपछिको नियमित प्रक्रिया भएको बताउदै जवाफ घुमाउने प्रयास गरे ।
उनले भने, सरुवा भएपछि दरबन्दीमा फिर्ता हुनैपर्छ त्यसैले उनलाई दरबन्दीमा रवाना दिएर फिर्ता गरेका हौं । स्मरण रहोस् स् इनर्वा नाकाका सई शाहले जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै ठुलो मात्रामा मरिच , अबैध भारतीय नक्कली नोट , अबैध सुन सहित गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिइ कार्वाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको थियो ।
उनले सफलता अनुसारको कामकारबाही गर्न थालेपछि एसपी ढकाल तनावमा थिए । पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उनलाई लखट्नु एसपी ढकालको यो कार्य प्रति चर्को आलोचना समेत प्रहरीले नै गर्न थालेको छ । एसपी ढकाललाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने प्रहरीलाई किन लखटेको भनी जिज्ञासा् राख्दा दरबन्दीमा फिर्ता पठाउने भएकोले उनलाई फिर्ता पठाइएको जवाफ दिए ।
हामीले उनीसित काज समेत रहेको अवस्थामा उनको काज रद्द गर्ने अनि रसुवा दरबन्दी भएका पोखरीया प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक गोपाल खड्का र मकवानपुर दरबन्दी भएका इनर्वा प्रहरी चौकीका प्रहरी हवल्दार सुरेन्द्र साहलाई किन फिर्ता नगरेको नि भनी प्रश्न राख्दा उनी अकमक्काए । पछि जवाफ दिएका उनले तपाईंले भनेर हुने हैन कसलाई पठाउने नपठाउने तय जिल्लाले गर्ने भन्दै यस बिषयमा पत्रकारले बोल्नु उचित नहुने बताएका थिए ।
यस्ता बदनामलाई एसपी ढकालले लखट्छन् त ?
पर्सा प्रहरीले सूचना संकलनको बहानामा सिभिलमा प्रहरी परिचालन गर्दै तिनलाई पैसा कमाउने राम्रो माध्यम बनाएको छ । धन कमाउनैका लागी प्रहरी चौकी भिस्वामा सई रोशन अधिकारी पुगेका छन् । एक बर्षदेखी त्यहींं कार्यारर्त हुँदा उनको मनोमानीले हद नाघेको छ । भिस्वाबाट रामु जयसवालले कपडा, सुकमेल , फेयर & लभ्ली जस्ता कष्मेटिक सामान अवैध रुपमा भित्र्याउने गरेका छन् ।
तस्करी गर्ने रामुले चीनमा बनाईएको नक्कली फेयर & लभ्ली भारतमा बनेको भनी नक्कली लेभल लगाई भारततिरै पठाउने गरेका छन् । भारतीय बजारमा सक्कली भन्दा नक्कली फेयर & लभ्ली छ्यापछ्य्पाती ओसारपसार हुुुँदै आएको छ ।
उनलेे चीनबाट बीरगंज ल्याउने, चीनमा बनेको लेभल मेटाउने र युनिलिभर भारतमा बनेको भनेर पठाउने गर्दछन् । अशोक गुप्ताले पनि सुपारी र मरिच भारतमा ठूलो परिमाणमा पठाउने गरेका छन् । गुप्ताको क्यारिङको काम लड्डु साह कानुले गर्दै आएका छन् ।
किशोर जैसवाल , पप्पु भनेर चिनिने भारतीय नागरिक, कपडा तस्करीका बादशाह एनुल अन्सारी लगायतले भिस्वाबाट लाइन चलाउने गरेका छन् । क्राइमका रूपमा खटेका अर्का बदनाम सई हुन् : बिनोद मल्लिक । उनले लाइन दिएकामध्य माधुरीबाट १२, मोटी (अहिस टोल) १०, मोरीबाट ५ , चन्दा ५ र अनिलबाट १० हजार रूपैयाँ लिने गरेका छन् । स्याउ नेपालबाट भारततर्फ जाने गर्दछ । त्यस्तै , साइकल प्रयोग गरी कपडा ल्याउने ठूलो गिरोह रहेको छ, त्यस समूहलाई पनि लाइन दिने गरेका छन् ।
साइकल प्रयोग गरी कपडा ल्याउनेमा शिव, मनोज, सुनीलाल, जितेन्द्र, आरती,मदन, जयसवाल, अंशु अकबर , प्रमोद, नवीन, सन्देश, लगायतसित लाइन खुलाएवापत मोटो रकम लिने गर्छन् । इनर्वा नाकामा हेटौँडावाली भनेर चिनिने एउटा समूह छ । त्यो समूह लाई पनि बिनोद मल्लिकले नै तस्करीको लाइन खोल्ने गरेका छन् । हेटौँडाका महिलाले यस क्षेत्रमा लामोसमयदेखि तस्करी गर्दै आइरहेकी छिन् ।
यसरी तस्करी गर्ने समूहमा जानुका, विन्दा, कल्पना, शान्तमाया, मोटी, पूर्णिमा , निर्मला, पवित्रा, मोटी, भवानीको टोली छ । कवाडको काम गर्ने मनसुंआलम , जयप्रकाश, अमरमिया, अजयप्रसाद , तमन्नासित प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँँका दरले लिने गरेको छ । यस्तै , अन्यत्र दरबन्दी भई लामो समयदेखी जिल्लाको सादा पोशाकमा खटी बदनाम भएका प्रहरी जवानद्वय राजु प्रसाद गुप्ता, राजेश यादवले पनि असुली कार्य गर्दैआएका छन् ।
टाइगर ग्रुपका नाममा परिचालित हवल्दार दिलिप सिंह र जवानद्वय वीर बहादुर साह, ओम शंकर यादव , वीरेन्द्र यादवले नामुद तस्कर विनोद साह, भगतजी , मुना मियाँ, जटाधारी यादव, वीरेन्द्र पटेल, बालकृष्ण पोख्रेेेलसित रकम असुल्ने गरेका छन् । भन्सार छलीका पोका देखिएको होस् या अन्य छापा हान्नुपर्ने घटना होस् हरेक ठाउँमा तत्काल पुग्नका लागी मोटरसाइकलमा खटिने यो टाइगर समूहले अपराधीदेखि गुण्डागर्दी र तस्करी गर्ने तीनै समुहबाट रकम लिने गरेका छन् ।
टाइगर टोली र घुमुवा टोलीको संरक्षणमा वीरगञ्जबाट दालको ठूलो मात्रामा तस्करी भइरहेको छ । वीरगञ्जका व्यापारीबीच गुड्डु नामले चिनिने व्यक्ति दालका यी तस्कर उमेश साहको विश्वासपात्र मात्र नभएर मेनेजरका रूपमा कार्यारत छन् ।
क्राइम ब्रान्च टोलीको नेतृत्व गरेका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानकुमार महतो झण्डै डेेढ बर्ष धनुषा ट्राफिकको प्रमुख बसी लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा सहभागी भई कमिसन खाई ज्याँदै बदनाम भएका प्रहरी अधिकृत हुन् । त्यसो त उनी कीर्तिपुरमा कार्यरत रहँदा देखि नै भ्रष्टाचारमा बदनाम भएका थिए । मधुसूदन सिलवाल धनुषा ट्राफिकमा सरुवा भएपनि उनी नगएपछि अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको दबाबमा पुनः दोस्रो कार्यकाल समेत काजमा बसेर महतोले अकुत सम्पत्ति कमाए ।
तीनै विवादित र बदनाम निरीक्षक महतो अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको क्राइम ब्रान्च टोलीको प्रमुखका रूपमा खटिएका छन् । अहिले तल्लो तहलाई मिलाएर तस्करी गर्नेहरूमा गुट्खाका सञ्जिव गुप्ता, विनोद झा, दाल र मरिचको तस्करी गर्ने उमेश साह, भेलीको तस्करी गर्ने जालिम, कवाडीको किंग भनेर चिनिने जटाशंकर, चल्ला , किंगका रूपमा चिनिने धर्मेन्द्र साह, जनरल वर्कर भनेर चिनिने मर्तुजा अन्सारी र भोला, कपडाको चर्चित तस्कर भनेर चिनिने ललित निकी, हरेन्द्र पटेल कुर्मी र कष्टम एजेन्टका रूपमा चिनिएका कमल पटेलको नाम समेत अग्रपंक्तिमा छ । त्यस्तै , अन्यत्र दरबन्दी भइ दस बर्षदेखी जिल्लामै रजाँइ गर्न पल्केका असईद्वय मित्र राई र गोपाल खड्काको समेत अशुली धन्दा उस्तै छ ।
खड्काको दरबन्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा अभियोजन शाखामा पर्दछ ।सिपाहीमा प्रवेश गरेदेखि नै वीरगञ्जमा कार्यरत दुई असईद्वयले व्यापारीदेखि तस्करहरुसँग खुलेआम रूपमा रकम असुल्ने कार्य गर्दैआएका छन् । त्यस्तै , वीरगञ्जको इनर्वा भन्साार नाकामा तस्करीका लागी उर्बर भूमीका रूपमा रहेको छ । उक्त क्षेत्रलाई बाह्रमासे नै कमाउने परिचित अड्डाका रूपमा लिइन्छ ।
त्यहाँ प्रहरी हवल्दार सुरेन्द्र साह र प्रहरी जवान बिजय यादवले समेेेत तस्करीबाट मासिक रकम लिँदै तस्करी गराएका छन् । त्यस क्षेत्रबाट अहिले खुलेआम रूपमा तस्करी भइरहेको छ । साहको दरबन्दी तीन नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको ईलाका प्रहरी कार्यालय ठींगन मकवानपुर भए पनि कार्यालय प्रमुखकै कमजोर कमान्डरका कारण हो या उनका बिश्वासिला ब्यक्ति भएर होस् उनी प्रहरी जवानबाट बढुवा भई पदस्थापना हुँदा समेत दरबन्दीमा जानुपरेका छैनन् । साह अहिलेसम्मकै बदनाम प्रहरी रहेको स्रोत बताउँछन् ।
जागीरमा प्रवेश गरेदेखि नै उनी कमाउ अड्डामा मात्रै जाने गरेको स्रोतले बतायो । यस अगाडि तीन नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको दरबन्दी ईलाका प्रहरी कार्यालय माडी चितवन हुँदा समेत दरबन्दीमा फिर्ता नभई रातोमाटे चेकपोस्टमा रहि तस्करीका सवारीसाधनबाट ब्यापकरुपमा हप्ता उठाउदै आएका उनैै साह जवानबाट बढुवा भएका थिए ।
डिआइजी र एआइजीलाई समेत हातमा लिएर उनीहरुलाई बदनाम बनाउने रणनीतिमा लागेेेका साहले हाल पर्साका एसपी रेवती ढकाल लाई समेत आफ्नु हातमा लिइसकेको स्रोत उल्लेख गर्छ । स्रोतका अनुसार हामीलाई तालीममा रहेको बताउनेे हवल्दार साहले अहिले भन्सारमा एकछत्र राज गर्दैै आएका छन् ।
काजमा रहेका उनलेे ब्रम्हलुट गर्दै तस्करीका लाइन व्यापक रूपमा खुलाउने गरेको स्थानीय दाबी गर्छन् । रातोमाटे चेकपोस्टमा हुँदा समेत तीन नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन एआइजी केशरीराज घिमिरेलाई समेत मिलाइ साहले अशुली आतंक नै मच्चाउने गरेका थिए । अर्का प्रहरी जवान विजय यादवले समेेेत मरिच र अलैँचीको तस्करी गर्ने तस्करहरु सँग मनलाग्दी रूपमा नै रकम उठाउने गरेका छन् ।
यसअगाडि लामो समयदेखि वडा प्रहरी कार्यालय विर्ता , इनर्वाका प्रहरी प्रमुख समेतलाई मिलाई ठूलो मात्रामा मरिच तस्करी हुँदैआएको थियो । उता , वडा प्रहरी कार्यालय पर्सा विर्तामा कार्यारत प्रहरी जवानद्वय बिनोद साह , सुुुकनारायण यादव र हवल्दार रामसुगारत राय यादवले व्यापारीहरुलाई थर्काउँदै रकम असुल गर्ने र तस्करी गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
विगत पाँच वर्षदेखि सोही कार्यालयमा रहँदैआएका प्रहरी जवान बिनोद साहले यस्तो गर्ने गरेको हो । सार्वजनिक अपराध तथा साना तिना मुद्दामा ५ हजारदेखि १५ हजार लिँदै फाइल चाँडो पठाउने र नदिए दुःख दिने गरेको पनि भेटिएको छ ।
प्रहरी जवान साह विर्तामा कार्यरत रहे पनि सँधैजसो घुमुवाको रूपमा रकम उठाउन मै व्यस्त हुने गरेका छन् । प्रहरी जवान साहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पटक–पटक कारवाही गरेको भएपनि अझै यस्ता खालका गतिविधि गर्न भने छाडेका छैनन् । यसअघि प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले व्यापारीहरु लाई धम्काउँदै पैसा उठाउँदै हिँडेको थाहा पाएपछि जिल्ला तानेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रशासन फाँटमा रहेका प्रहरी निरीक्षक विकास तामाङ र मुद्दा शाखाका प्रहरी नायव निरीक्षक चन्द्रप्रसाद सिलवालले बचाउ गर्दै उनलाई पुनः विर्तामा नै पठाउन सफल भएका थिए । प्रहरीका हाकिमलाई रिझाउन चतुर साहले अहिले व्यापारी र तस्करबाट उठाएको रकमले वीरगञ्जमा घर नै ठड्याइ सकेका छन् । मिथिलानगरमा जग्गा खरिद गरेर साहले पक्की घर बनाएका हुन् । घर बनाउन अझै बाँकी रहेको भन्दै साहले तस्करहरूसँग पैसा माग्ने गरेका छन् ।
वडा प्रहरी कार्यालयमा अहिले नयाँ प्रहरी निरीक्षक आएसँगै जवान साह उनलाई पनि रिझाउन विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदै आएका छन् । प्रहरी जवान साहकै कारण वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताको साख समेत अहिले धरापमा पर्ने देखिएको छ । जानकी टोलस्थित प्रहरी चौकीका सई मुक्ति यादवले रातको समयमा एसपी ढकाललाई समेत झुक्याई ठूलो मात्रामा दालको तस्करी गराउन सहयोग गरिरहेका छन् । जानकी टोल भन्ने बित्तिकै अहिले वीरगञ्जमा दालको तस्करी लाइन चलेको भनिन्छ ।
उमेश साह, जालिम मियाँ, युनिष, दिपक पट्टेल नाम गरेका तस्करलाई सई यादवले तस्करीको लाइन दिएका छन् । ट्याक्टर मार्फत् दालको तस्करी गर्ने कार्य तस्करले गर्छन् । यादव यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका प्रहरी हुन् भने टेण्डर हालेकै भरमा जानकी टोलमा रहेको प्रहरी चौकी पाएका छन् ।
उता , असार २२ गते शुक्रबार पर्सा प्रहरीको क्युअारटी टाेलीका प्रहरी निरीक्षक राजेश दत्तले नारायणी अस्पताल नजिक दुई वटा माेटरसाईकलमा भन्सार छली गरी ल्याएको सामान पक्राउ गर्याे । राजेश साह र जटाधारीकाे सामान पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका मानिस छाेडेर तत्कालै १५ हजार घुस लिदै बरामद माेवाइल साेही दिन राति ८ बजे छाेडेर थप ५ हजार खादैै उन्मुक्ति दिए ।
अाईतबार दुई माेटरसाईकल छाेड्न ४० हजार माग्दा बार्गेनिङ गरि २५ हजार घुस खाइ छाडेका हुन् । यस्तै , अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणीमा समेत प्रहरी हवल्दार रामबाबु यादव र प्रहरी हवल्दार महम्मद हुसेेनले उत्पात नै मच्चाउने गरेका छन् ।
उनीहरुको दरबन्दी जिल्लामा छैनन् । यादवको दरबन्दी प्रहरी चौकी सालु रामेछाप भएता पनि बिगत लामो समयदेखि अबैध असुली कार्यमा ब्यस्त रहिआएका छन् , हुसेन बढुुुुवा भएपनि दरबन्दीमा गएका छैनन् भने पर्सा जिल्लामा आतंक नै मच्चाएका छन् ।
उनलाई केही ब्यक्तिसित अनुुुचित लाभ लिइ तस्करीका लाइन खोलाइदिएको प्रमाणित भएपछि तत्कालीन डिआइजी गणेश केसीले निर्माणाधीन मुग्लिङ्ग - नारायणगढ सडक खण्ड हेर्ने गरी खटाईएकोमा तत्कालीन डिआइजी गणेश केसीको सरुवा भएलगत्तै उनलाई रातोमाटे गण हुँदै तत्कालीन एसएसपी सुर्य प्रसाद उपाध्यायले पुनः उनलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणीमा तान्दा उनको मनोमानीले हद नाघेको हो । उनी पर्सा जिल्लाभरकै बदनाम प्रहरी मध्य गनिन्छन् ।
निजहरूको बिषयमा प्रहरी मुख्यालयमा पटकपटक उजुरी पर्ने गरेको साथै , उक्त उजुरी प्रति संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय नारायणीले समेत खासै चासो नदिने गरेको स्रोतले बतायो ।